अस्ताए पञ्चेबाजाका नायक मानबीरे दमाई ! « Rara Pati
अस्ताए पञ्चेबाजाका नायक मानबीरे दमाई !
२७ जेष्ठ, दैलेख । दैलख जिल्लाको आठविस दराका पञ्चेबाजाका नायक मानबीरे दमाईको निधन भएको छ । दैलेख जिल्लाको आठविस नगरपालिका वडा नंं १ साताला निवासी उनको आज विहान साढे ४ बजे ८८ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।
मानबीरे दमाईका बारेमा पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रङ्गनाथ जोशीले साताला भेगको मौखिक इतिहासमा पूर्णविराम लाग्यो भनी टिप्पणी गरेका छन्।
जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनको सम्झँनामा लेखेको छन्, ‘मानवीरे नेपालीको निधनले सातालाको मौखिक इतिहासमा पूर्णविराम लाग्यो । मानवीरे नेपालीका बा लटे दमाई नाम चलेका दमाया बाधक थिए । उनीसँग प्राचिन लिखतको किताब थियो । मलाई देखाउनु भएको थियो ।बाबुका गुण र कौशल मानवीरे नेपालीमा पनि थिए । मैले साताला छोड्दा मानवीर नेपाली लक्का जवान थिए । दमाहा बाधनमा त्यति बेला यीनका बाबुको नै हाली मुहाली थियो । तर यीनि प्रशिक्षित हुँदै थिए । मैले यीनको कौशल देख्ने मौका भने पाइन । थुप्रै थरीका वंशावली यिनीहरूले गाउँथे । त्यो कला कसैलाई सिकाएर जानु भयो की नाइ । जेहोस सातालाले सम्झने छ मानवीर नेपालीलाई ।’
अधिकारी देवताका धामी, पन्चैबाजाका नाइके र धेरै जातजातिको वंशावली सविस्तार बताउने सक्ने इतिहासबारे जानकार मानबीरे दमाईको आजै कर्णालीको डाब चिहानघाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ । उनको निधनले आठविस दराका आम मानिस शोकाकुल बनेका छन् ।
मानविरे दमाई र अमरसिंह ढोली (हुड्के) जस्ता अग्रजहरूले पञ्चेबाजा, हुड्के नाचका माध्यमबाट कमाएको ख्यातीलाई अहिलेको नयाँ पुस्ताले यसको व्यवसायिकरण समेत गरेर झनै व्यापक बनाउन जरुरी छ ।
समाजको वास्तविक इतिहास बुझ्न ठुलाबडाको इतिहास मात्र नभई अहिलेको पुस्ताले गुमनाम मानबिरे दमाईजस्ता हजारौं प्रतिभाहरूको खोज अनुसन्धान गरी उजागर गर्न जरुरी छ ।
(तस्बिरः विरबहादुर मार्क्सवादी)
सुर्खेत, ३ असोज । निजी क्षेत्रको वायुसेवा कम्पनी गुण एयरलाइन्सले दशैं अगावै सुर्खेत–काठमाडौं नियमित उडान